Muvambi wePassword akashaya aine makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Ainzi F. Corbató | Linux Vakapindwa muropa
Iye akatanga password akashaya aine makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
Muvambi weiyo password ndiFernando J Corbató. Semamwe mapiyona akawanda esainzi yemakomputa, tinodzidza kuti ndivanaani kana nhau dzekufa kwavo dzaburitswa, kusanganisira Hupenyu hwake pa Wikipedia zvakapfupika. Rufu rwakaitika musi wa12 wemwedzi uno nekuda kwematambudziko kubva kuchirwere cheshuga.
Corbató akagadzira zano rekushandisa mapassword ndichiri kushanda munzira dzekugovera nguva izvo zvaizobvumidza vanhu vazhinji kushandisa imwechete komputa zvakachengeteka panguva imwe chete.
Musayendisiti ane mukurumbira akatanga zvidzidzo zvake paYunivhesiti yeCalifornia, Los Angeles, asi mushure megore aifanira kukanganisa zvidzidzo zvake nekuda kweHondo Yenyika II. Kwemakore matatu akatevera, akashanda kugadzirisa makomputa masisitimu eUnited States Navy.
Mushure mehondo, Corbató akanyoresa kosi yeFizikiki kuMassachusetts Institute of Technology (MIT), uko akapedza kudzidza muna 1950 uye akagamuchira doctorate yake muna 1956. Achangopedza kudzidza, akabatana neMIT Computer Center, kwaaizove purofesa muna 1965. Pachinzvimbo ichocho, akapindira mabasa ake ekudzidzisa nekutsvagurudza kusvika pamudyandigere.
Corbató akaramba ari purofesa paMIT kudzamara aenda pamudyandigere, kwaakashanda mu izvakakosha IT kuferefeta iyo yaizozivikanwa zviri pamutemo.
Pamusoro peiri basa rambotaurwa mukugadzirwa kwemaitiro ekugadzirisa nguva, Corbató anoonekwa seanokonzeresa kuvandudzwa kweMultics operating system. VaMultics vakapayona akati wandei mazano ari kushandiswa nhasi mune zvazvino mashandiro masystem uye zvakatungamira mukugadzirwa kweiyo Unix inoshanda sisitimu, iyo ichiri kushandiswa zvakanyanya. Unix ndiyo zvakare sosi yekufemerwa kweLinux, Mac OS X, Android, iOS, uye Chrome OS.
Muna 1990, Corbató akahwina mubairo weTuring webasa rake mukusimudzira kwakawanda-chinangwa, hukuru-hukuru, kugovana-nguva, uye kugovana zviwanikwa makomputa masystem. Pakati pemhedzisiro yekutsvagisa kunoshamisa mukutanga kwema1960 kwakauya pfungwa yekushandisa mapassword.
Nekudaro, aive asiri murudo neyakagadzirwa yake. Muna 2014 Corbató yakaratidza izvozvo mapassword anga ave chimwe chinhu che "hope dzinotyisa". Panguva yaakataura kuti munzvimbo yanhasi nzira yechengetedzo yekuchengetedza yakanga yave isingadzoreki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iye akatanga password akashaya aine makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
Australia kumanikidza Facebook neGoogle kuburitsa maalgorithms avo nekuda kwemitemo mitsva
Pstrong akaburitsa OpenTimelineIO yeiyo Academy Software Foundation